Phalanx စျေး - အွန်လိုင်း PXL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Phalanx (PXL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Phalanx (PXL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Phalanx ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $825 153.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Phalanx တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Phalanx များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PhalanxPXL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00778PhalanxPXL သို့ ယူရိုEUR€0.00659PhalanxPXL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00595PhalanxPXL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0071PhalanxPXL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0707PhalanxPXL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0491PhalanxPXL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.172PhalanxPXL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.029PhalanxPXL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0104PhalanxPXL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0109PhalanxPXL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.177PhalanxPXL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0603PhalanxPXL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0411PhalanxPXL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.583PhalanxPXL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.3PhalanxPXL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0107PhalanxPXL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0117PhalanxPXL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.241PhalanxPXL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0542PhalanxPXL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.822PhalanxPXL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩9.28PhalanxPXL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.95PhalanxPXL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.572PhalanxPXL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.216
PhalanxPXL သို့ BitcoinBTC0.0000007 PhalanxPXL သို့ EthereumETH0.00002 PhalanxPXL သို့ LitecoinLTC0.000135 PhalanxPXL သို့ DigitalCashDASH0.00009 PhalanxPXL သို့ MoneroXMR0.00009 PhalanxPXL သို့ NxtNXT0.646 PhalanxPXL သို့ Ethereum ClassicETC0.00109 PhalanxPXL သို့ DogecoinDOGE2.3 PhalanxPXL သို့ ZCashZEC0.00009 PhalanxPXL သို့ BitsharesBTS0.3 PhalanxPXL သို့ DigiByteDGB0.298 PhalanxPXL သို့ RippleXRP0.026 PhalanxPXL သို့ BitcoinDarkBTCD0.000275 PhalanxPXL သို့ PeerCoinPPC0.0278 PhalanxPXL သို့ CraigsCoinCRAIG3.64 PhalanxPXL သို့ BitstakeXBS0.34 PhalanxPXL သို့ PayCoinXPY0.139 PhalanxPXL သို့ ProsperCoinPRC1 PhalanxPXL သို့ YbCoinYBC0.000004 PhalanxPXL သို့ DarkKushDANK2.56 PhalanxPXL သို့ GiveCoinGIVE17.27 PhalanxPXL သို့ KoboCoinKOBO1.82 PhalanxPXL သို့ DarkTokenDT0.00716 PhalanxPXL သို့ CETUS CoinCETI23.03